Wararkii ugu dambeeyay ee Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda | Somaliland Mirror
Home WARARKA Wararkii ugu dambeeyay ee Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda
adminSep 07, 2020WARARKA0
Kooxda LaLiga ka dhisan ee Barcelona ayaa weli xiiseyneysa weeraryahanka reer Argentina ee Lautaro Martinez, kaasoo 21 gool u dhaliyay Inter xilli ciyaareedkii 2019-20.
Inay heshiis la gaadhi karaan iyo in kale ayaa lagu soo waramayaa in la ogaan doono toddobaadkan.
Wakiilada Martinez ayaa la kulmi doona hogaamiyaasha Inter isbuucaan si ay u qiimeeyaan xaaladiisa, sida laga soo xigtay Sport.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Barcelona iyo Inter ay si joogta ah u wada xidhiidhaan, inkastoo farqi weyn uu u dhexeeyo labada kooxood.
Barca ayaa dooneysaa inay bixiso ugu badnaan €65million oo lagu daray ciyaaryahan, halka Inter ay dalbaneyso ugu yaraan € 85million.
Goal ayaa sheegaya in Barcelona ay isku diyaarineyso dalabkeedii ugu dambeeyay ee Martinez toddobaadkan.
– Barcelona ayaa raadineysa weeraryahan dhexe (Striker) iyadoo Luis Suarez uu qarka u saaran yahay inuu baxo. Goal ayaa sheegeysa in Barca iyo Juventus ay ka wada hadlayaan qiimaha 33 jirkan reer Uruguay, kaasoo la sheegay inuu ogolaaday heshiis 3 sanno ah oo uu kula joogayo kooxda heysata horyaalka Serie A.
– Staying at Camp Nou iyo Marca ayaa warinaya in Philippe Coutinho lagu wado inuu sannadka 2020-21 ku qaato Barca. Coutinho ayaa cilli-ciyaareedkii 2019-20 amaah ugu maqnaa Bayern Munich laakiin kooxda LaLiga ayaa meesha ka saartay inuu amaah kale u dhaqaaqi doono, siday warbixintu sheegtay.
– Ciyaaryahanka kalee qarka u saaran inuu ka tago Barcelona waa Arturo Vidal. Sport Mediaset ayaa sheegaysa in Vidal laga filayo magaalada Milan si dhaqso ah isagoo isku diyaarinaya inuu ku biiro Inter, halkaasoo uu ku ogolaaday heshiis 2 sanno ah oo uu ku darsan karo mid 3aad.
– Real Madrid, dhanka kale, waxay umuuqataa inay ceshan doonto Gareth Bale. Mundo Deportivo ayaa qortay in Madrid aysan helin wax dalab ah oo ku aadan Bale, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo ilaa 2022 laakiin lala xidhiidhinayo inuu ka tagayo Santiago Bernabeu.
– Iyadoo Ronald Koeman uu uga tagay shaqada Netherlands inuu qabto shaqada tababarnimo ee Barcelona, ​​ayaa Netherlands ay raadineysa tababare cusub. Voetbal International ayaa werineysa in ciyaartooydu ay doonayaan Henk ten Cate inuu noqdo tababaraha xiga ee Netherlands.
– Weeraryahanka Watford Gerard Deulofeu ayaa lagu soo waramayaa inay doonayaan kooxo badan oo yurub ah. The Telegraph ayaa warinaysa in kooxaha Milan, Napoli iyo Sevilla ay doonayaan Deulofeu oo ay amaah ku haystaan ​​iyaga oo ikhtiyaar u leh in ay iibsadaan.
Previous PostDaawo:Maxamuud Xaashi Oo Dhaliilihii Ugu Adka Kula Hadlay Madaxwayne Biixi Next PostXildhibaanada aqalka sare itoobiya oo diidey doorasho ka dhacda dalkaasi.